Momba anay - Hebei Delin Machinery Co., Ltd.
30 taona niainana tamin'ny fikarohana, famolavolana, fanamboarana ary serivisy aorian'ny fivarotana hanomezana vahaolana feno.
Hebei Delin Machinery Co., Ltd. dia iray amin'ireo orinasa paompy lehibe indrindra miompana amin'ny famokarana paompy slurry any Shina. Izy io dia mandrakotra velaran-tany mihoatra ny 40000m2 amin'ny tany ary maherin'ny 22000 m2 ny fananganana. Ny vokatra dia ampiasaina amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, metallurgical, drafitra tanàna, herinaratra, arina, renirano, renirano, FGD, solika, akora simika, akora fananganana sns .. Ankoatra ny tsena anatiny dia amidy amina firenena sy faritra maherin'ny 50 ny vokatra.
Mampihatra tanteraka ny 'Total Quality Control' ny orinasa ary efa nahazo mari-pankasitrahana ISO9001, ISO14001 ary ISO / T18001.
Ny orinasa dia manaraka ny foto-kevitry ny 'Moral Team, vokatra tsara dia tsara, serivisy marika' ary miaraka amin'ilay fitsipika 'Quality voalohany, Customer Superior ”mba hanomezana vokatra tsara sy ho an'ny mpanjifa mpanjifa.
Mampiasa rindrambaiko injeniera mpanampy solosaina mandroso ny orinasa handrafetana ny vokatra sy ny haitao, izay mahatonga ny fombanay sy ny haavon'ny endriny hahatratra ny sehatra mandroso iraisam-pirenena. Ny orinasa dia manana tobim-pitsapana fitiliana kilasy voalohany eto amin'izao tontolo izao, ary ny fahaizan'ny fitsapana dia mety hahatratra 13000m³ / h. Ny famoahana isan-taona ny vokatra dia 10000 set na taonina amin'ny fananganana firaka chrome avo. Ny vokatra lehibe dia ny Type DH (R), DM (R), DV (R), DF (DHF), DG, DSC (R), sns. Size: 25-1200mm, Capacity: 5-30000m3 / h, Head: 5-120m. Ny orinasa dia afaka mamokatra fitaovana isan-karazany ao anatin'izany High Chromium White Iron, Super High Chromium Hypereutectic White Iron, Low Carbon High Chromium Alloy, Carbon Steel, Stainless Steel, Duplex Stainless Steel, Ductile Iron, Gray Iron, sns Afaka manome fingotra voajanahary koa izahay, faritra sy paompy elastomer.